प्रदेश ५ मा कोरोना बिशेष कृषि कार्यक्रमः उत्पादन र बजारीकरणमा ५१ करोड बजेट - Sisne Online
प्रदेश ५ मा कोरोना बिशेष कृषि कार्यक्रमः उत्पादन र बजारीकरणमा ५१ करोड बजेट
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’ सञ्‍चालन गर्ने भएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन ५१ करोड १४ लाख रुपैंया साउन मसान्तसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
कृषि एम्बुलेन्स परिचालनका लागि ३४ लाख रुपैंया, बेमौसमी आलु उत्पादन कार्यक्रम गुल्मी, प्युठान, रुकुम र रोल्पामा सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैंया खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो कार्यक्रमबाट ५ सय किसान लाभान्वित हुनेछन्। कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीसम्ममा आलु खेती गरेको हुनुपर्ने, प्रति रोपनी ६ हजार रुपैंयाको दरले अनुदान दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
व्यवसायिक तरकारी उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम दाङ,पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम सात जिल्लामा सञ्चालन हुने भएको छ।
यो कार्यक्रमबाट ७ हजार लाभान्वित हुने छन्। जसमा कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीमा खेती गरेको हुनुपर्ने छ । मल र बीउका लागि प्रति रोपनी ५ हजार रुपैंयाका दरले अनुदान दिने र यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैंया खर्च हुने छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्केका र व्यवसायिक खेती उन्मुख प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यो कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८० लाख खर्च गरिने छ। यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै एक सय ९ वटै पालिकामा गरिने छ । व्यवसायिक खेतीका लागि मल विषादी, स–साना औजार, प्लाष्टिक घर, च्याउ घर, खोर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, प्रति किसान २० हजारका दरले सहयोग गरिने छ।
१० हजार ९ सय लाभान्वित हुने योजना बनाइएको छ। ब्रोइलर कुखुरापालन साना किसान लक्षित कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। २ हजार किसानलाई ३५ हजार रुपैंयाका दरले अनुदान दिने, ६ हजार लाभान्वित हुने योजना छ । दूध उत्पादक किसान विशेष राहत कार्यक्रमका लागि २ करोड ८० लाख रुपैंया बजेट छ ।
दूध उत्पादनको विगत आठ महिनाको विक्री तथ्याङक हेरी लकडाउनको ४० दिनको प्रति लिटर १० रुपैंयाका दरले अनुदान दिने निर्णय भएको छ। बीउ उत्पादन कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैया बजेट छ।
यो कार्यक्रम १२ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। २० हजार विघामा खाद्यान्न र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने, प्रति बिघा २० हजार रुपैंयाका दरले दिइने छ।
२०७७ जेठ १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेका निर्णयहरु:
१. कोभिड—१९ बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५१ करोड १४ लाख रुपैंया साउन मसान्तसम्म खर्च हुनेछ ।
५.केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न स्विकृति दिने ६.जेठ ९ गते प्रदेश सभा आव्हानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ।
८. कोरोना विशेष अस्पतालको क्षमता बढाउने । बाँकेमा डेण्टल अस्पताल र सैनिक अस्पतालमा १ सय बेड आइसोलेसन तयार गर्ने । बुटवलमा २ सय बेड थप्ने भैरहवाको भीम अस्पतालमा १ सय बेड थप्ने । बाँके, बुटवल र भैरहवामा बिरामीको चाप भएकाले तत्काल राख्न नसकिएको अवस्थामा दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा विरामी पठाउने । विरामीको चापलाई ख्याल गर्दै तौलिहवास्थित कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसमा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने । त्यसको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापन तौलिहवा जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने ।
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः कोरोना नियन्त्रण र कृषिको आत्मनिर्भरतामा जोड (पूर्ण पाठ)
चौरजहारी घटनाको अनुसन्धान शुरु
कमलरी प्रथामा बनेको चलचित्र लावाजुनी युटुबमा रिलिज (हेर्नुहोस् चलचित्र)